Wararka - Maxay ku kala duwan yahiin yaanyo iyo ketchup?
Waa maxay farqiga yaanyo iyo ketchup?
Markaan ka dhigno yaanyada la shiiday dhadhan aad u qaro weyn iyo isku mid ahaansho cufan, qaabkan waxaa loo yaqaan yaanyo diir ah. Waxaan u isticmaali karnaa yaanyada yaanyada dhadhan kala duwan iyo qaabab kala duwan sidoo kale. Tani waxay siinaysaa dhadhan dhab ah gumbos, maraqyo, fuud, dheriga dubay iwm.
Waxyaabaha lagama maarmaanka u ah yaanyo ketchup waa marka hore yaanyada ka dibna khal, sonkor iyo uunsi sidoo kale. maanta, ketchup yaanyo waxay noqotay qayb muhiim ah oo ka mid ah miiska cuntada oo waxay siisaa dhadhanka ugu fiican cuntooyinka degdegga ah sida burgers, chips iyo pizza.
Waqtiga boostada: Meey-08-2020